Kaody postcode / kaody zip, arabe, tanàna, firenena endrika lisitry ny rakitra Excel
Download kaody paositra
Angona momba ny Street &
ho an'ny firenena 195
Angon-drakitra arabe Angon-drakitra
Isika no mpitarika amin'ny sehatry ny fanomezana angon-drakitra kaody paositra/kaody paositra. Manolotra angon-drakitra tena tsotra sy marina momba ny kaody paositra/kaody paositra, manodidina/faritra & anaran'arabe maneran-tany izahay. Ity angon-drakitra ity dia natsangana avy amin'ny loharanom-pahefana, manangona ny angona rehetra ilainao amin'ny toerana iray. Ambonin'izany dia miantoka ihany koa izahay fa ny angon-drakitra omena dia manara-maso sy mifanentana hatrany.
Angona fanondro ho an'ny orinasanao
Fizarana eo an-toerana & Administratif
ZIP codes, postcodes, arabe
Kaody fanondroana (ISO, NUTS, FIPS, ..)
Zone ora, DST, Elevation & more...
Katalaogin'ny vokatra Santionany
Faritra administratif 250 000
Tanàna 13 000 000
34 000 000 arabe
Eoropa Andrefana Afeno ny
Eoropa Atsinanana Afeno
Amerika Avaratra Afeno
Amerika Atsimo & Afovoany Afeno
Afovoany Atsinanana Afeno
Rep. Afrika Afovoany
Ampitomboy ny fanentananao anio!
Raha hividianana ny angon- drakitra dia tsindrio ny "Buy" bokotra. Rehefa tonga eo amin'ny pejin'ny datasets, tsindrio ny "Add to cart" bokotra. Ny dingana farany dia ny manindry ny "Proceed to checkout" bokotra.
Fenoy ny antsipirian'ny fandoavanao dia vita ianao! Azonao atao ny mandoa amin'ny carte de crédit/debit, PayPal, na Bitcoins.
Rehefa vita ny fandoavam-bola, dia alefa avy hatrany amin'ny mailaka, amin'ny Excel na endrika hafa misy ny angona.
Fampidirana mora amin'ny tontolo fampandrosoana anao
Manolotra angon-drakitra kaody paositra maneran-tany ihany koa izahay, misy ny kaodim-paositra amin'ny distrika 195, tanàna 4400 mahery ary tanàna ambanivohitra/faritra an-tapitrisany. Avelao izahay hanampy anao sy ny orinasanao hikaroka, hanamarina, hanadio na hanamboatra adiresy, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny angon-drakitray lehibe izay azo esorina amin'ny tetikasa na asa rehetra. Tazony avo lenta ny kalitaon'ny adiresy ary miantoka fa mahomby ny tetikasanao. Manome fampahalalana amin'ny paositra izahay amin'ny antsipiriany toy ny arabe any amin'ny faritra manokana amin'ny endrika tahiry isan-karazany, ao anatin'izany ny SQL, Oracle ary Access. Na ny angona amin'ny endrika Excel aza dia azo alamina.
Mba hanamorana anao dia misy amin'ny fiteny rehetra ampiasaina eran-tany ny angona. PostCodeZip dia manome fampahalalana momba ny angon-drakitra ho an'ny firenena 195, ao anatin'izany ny singa statistika, kaody reference, faritra misy fotoana ary sehatra fitantanana. Ny fampahafantarana momba ny firenena, tanàna, distrika ary ambanivohitra manokana ary koa ny fampahalalana amin'ny antsipiriany toy ny arabe sy ny kaodim-paositra dia misy ihany koa.
sy fanitsiana adiresy:
Miaraka amin'ny teboka fanondro vitsivitsy, ny angon-drakitray dia azo ampiasaina hanitsiana ny fahadisoana tsipelina. Amin'izany fomba izany dia manalavitra ny tsy maintsy hanitsiana ny tsy fahatomombanana amin'ny tanana izahay, ka hampihena ny fandaniana. Manana tahiry be dia be izahay ho an'ity tanjona ity. Ny angon-drakitra dia azo ampiasaina hanamarinana ny adiresy amin'ny alàlan'ny kaody paositra sy ny anaran'ny arabe.
Ny orinasanay PostCodeZip dia manome kajy lavitra. Afaka manao kajy ny elanelana misy eo amin'ny teboka roa amin'ny tsipika mahitsy na amin'ny halaviran-dalana. Ity dia fitaovana mahagaga rehefa manara-maso fiara na mikasa ny lalana fanaterana.
Assimilation tsy misy ezaka amin'ny Rafitra fitantanana angona:
Ny angon-drakitra PostCodeZip dia mora aondrana amin'ny endrika CSV na GIS fanamiana amin'ny rafitra na sehatra fitantanana rindrambaiko. Te-hahafantatra ve ianao raha azo ampidirina amin'ny rafi-pitantanana rindrambaiko ny angona PostCodeZip? Avy eo azafady mifandraisa amin'ny ekipa mpanohana anay. Ho faly izy ireo hamaly ny fanontanianao.
Na mila angon-drakitra ara-jeografika ho an'ny fampiharana iray ianao, tranonkala iray na hanamarina ny endrika, dia misy ny fahafahana maro satria ny angona dia aseho amin'ny endrika tsotra izay azo ampiasaina amin'ny fomba maro samihafa. Ny angon-drakitra dia ahitana faritra, tanàna na toerana, kaody paositra ary arabe amin'ny endrika CSV sy Excel. Miankina amin'izay ilainao amin'ny orinasanao. Azonao atao ny mampiasa ny angona ho an'ny fampiasana manokana, orinasa na orinasa. Ny rakitra toerana dia misy lisitry ny toerana miaraka amin'ny kaody paositra sy ny fizaran-paritra, faritany, fanjakana, prefektiora na faritra. Ny iray amin'ireo angona angona ireo dia tsy isalasalana fa mahAfeno zavatra andrasanao. Jereo eto ny fonosanay.
Data & serivisy manokana
PostCodeZip dia manome andiana serivisy izay mikendry ny hanatsara ny kalitaon'ny angonao. Ao anatin'ny adiny roa, dia manodina ny angon-drakitrao izahay ary mamerina azy ireo any aminao efa voadio sy nanankarena.
Fitaovam-pitadiavana toerana sy
Tondroy ny toerana misy anao GPS (latitude & latitude) amin'ny adiresy na anaran-toerana azo vakina amin'ny alàlan'ny angon-drakitray lalina. Avelao hanampy anao amin'ny fanitarana ny orinasanao any amin'ny faritra vaovao ny angon-drakitray momba ny angona geocode.
Fanamarinana endrika sy
fanadiovana data CRM:
Ny angon-drakitray dia azo ampiasaina hanamarinana ny mombamomba ny adiresin'ny forums, manamaivana ny filan'ny olona hanamarina ny angon-drakitra. Miaraka amin'ny angon-drakitray, azonao atao ny mandamina sy manome alalana ny angona miditra amin'ny forum rehetra. Makà lisitra feno ny arabe. Ny angon-drakitra ihany koa dia ahafahanao mameno ny fampahalalana tsy hita. Manatsara angon-drakitra an-tanàna miaraka amin'ny faritra, fanjakana, faritany ..
Data & More".
Mamorona tatitra sarobidy, antontan'isa mahasoa ary sarintany amin'ny antsipiriany ho anao sy ny orinasanao. Ny fampiasana ny angon-drakitray dia mety mahasoa rehefa mijery ny varotra amin'ny sehatra samihafa. Raha efa manana angon-drakitra momba ny varotra ianao, dia azo ampiasaina hamakafaka ny angon-drakitra isaky ny faritra na firenena ary hanamarina ny angona sasany.
Aza misalasala mifandray aminay raha manana fanontaniana momba ny vokatray ianao. Azonao atao ny mampiasa ny endrika fifandraisana eto ambany: